Shabeelada Hoose | News From Somalia
Category Archives: Shabeelada Hoose
SHABEELADA HOOSE:-Amisom oo lacag ka qaadata Isbaaro taala Sh.Hoose(waa tumaa isbaradaas immisa ayaana ka soo gasha maalin walba?)
Posted on May 13, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Iyadoo maalmahanba ay cabasho ka soo yeereysay Isbaarooyinka tirada badan ee daadsan wadada u dhexeysa Afgooye iyo Marka ayaa wararku sheegayaan in Ciidamada Amisom ay qeyb ku leyihiin Isbaarooyinkaas.
Wararka ay markanews heleyso ayaa sheegaya in Isbaarada Maleeshiyada Dowladda u taala deegaanada Shalambood iyo Buufow ay qeyb ku leeyihiin Ciidamada Amisom ee ku sugan labadaasi Tuuloooyinkaas!.
Sarkaalka madaxda ka ah Ciidamada Amisom ee Buufow ayaa Isbaarada halkaas u taala laga siiyaa maalin walba 100$ ama ka badan oo marna loogu gado Neef Ari ah, mararka kalena kaararka telefoonada.
Sidoo kale, Saraakiisha Ciidamada Amisom ee Shalambood ayaa Isbaarada Shalambood ku leh 100$ maalintii.
Labdan Isbaaro ee Buufow iyo Shalambood ayaa waxay u taala maleeshiyo beeleed ka amar qaadata gudoomiyaha Gobolka Shabellada Hoose Cabdulqaadir Siidi.
Dhacdadan ayaa ah tii ugu horeysay ee ka dhacda Soomaliya ee ay ciidamo Amisom qeyb ku yeeshaan lacag laga soo qaday Isbaaro lagu dhibaateeynayo Ummadda Soomaliyeed.
Tani ayaa daliil u ah in Ciidamada Amisom ay la sii qabsanayaan dabeecada Ciidamada iyo maleeshiyaadka Soomalida ee ay la shaqeeyaan tan iyo markii ay Soomaliya yimaadeen 2007.
Saraakiisha DKMG ah ayuu ugu baaqay in ay bartaan habka siyaasadda iyo maamulka iyagoo adeecaya macalinkooda A.Mahiiga.
“kkk waa in aan wax ka baranaa macalinkeena Mudane Mahiiga oo aan uga mahad celineyno sida uu TFG u gacansiiyo” ayuu yiri shariif Sheekh Axmed oo u muuqday in u raali gelinayay Agostina Mahiiga.
Madaxda DKMG ah ayaa ku caan baxay dabadhilifnimo, Musuqmaasuq iyo in ay u hiiliyaan kuwa Nasaarada ah iyagoo ka hiilinaya Muslimiinta inta macooda ah.
DHAGEYSO:-“Shabaabka ayaa Runtii naga Fiican Sababtoo ah ma Dhigan Jirin Isbaarooyinka Faraha Badan Ee Ciidankeenu Dhigteen”Cabdulaahi Muuse oo ah madaxa siyaasadda gobolka Sh/hoose ee dowladda Federalka!
Cabdulaahi Muuse oo ah madaxa siyaasadda gobolka Sh/hoose ee dowladda Federalka ah ayaa sheegay in isbaarooyin xad dhaaf ah ciidamadoodu u yaalaan wadada isku xirta Shalaambood iyo Muqdisho.
Cabdulaahi waxa uu sheegay in isbaarooyinka lagu dhaco dad weynaha madaxda dowladduna wax ka qaban waayeen kadib markii dhowr jeer looga ashtakooday.
Waxa uu xusay in isbaarooyinku u yaalaan ciidamo mooryaan ah oo shaar dowladeed loo galiyay isagoona muujiyay inuu jiro xifaaltan qabyaaladeed oo mooryaanta dhexdooda ah.
Hadalka Cabdulaahi Muuse ayaa kusoo aaday xilli maalintii shalay uu bannaan bax ka dhacay degmada Afgooye kaasoo looga soo hor jeeday isbaarooyinka.
Mar aan C/lhi Muuse weydiinay su’aal la xiriirtay farqiga u dhaxeeya iyaga iyo Mujaahidiinta ayuu sheegay in uu mujaahidiinta u qirayo ammaantooda.
Wuxuu sheegay in markii mujaahidiintu joogeen wadadu nabdooneyd laakin markii iyagu yimaadeen wadadu noqotay mid fasaad ah.
Halkan Ka Dhageyso Hadalka C/laai Muuse
ISHA WARKA RADIO ALFURQAAN.COM
VIDEO XUSUUSIN AH:-Abwaan Xabeeb oo Sanooyin ka hor ka hadlay xaalada maanta ka taagan Gobolka Banaadir iyo Shabeelooyinka oo Cakiran!
Posted on May 12, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Isbaarooyiin xad dhaaf ah oo maleeshiyaad katirsan Dowlada ama nidaamka kaaraha Amisom saran ay soo dhigteen maalmahan Gobolka Banaadir iyo Shabeelooyinka Gaar ahaan wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye iyo wadada isku xirta magaalada Marka iyo degmada Afgooye iyo tan isku xirta Xamar iyo Jowhar oo caqabdo adag ka taagan yihiin iyo sido kale dhaca kufsiga iyo dilalka ku sii baahya degmada Afgooye,Marka Wanlaweyn ,Balcad,Jowhar iyo Tuulooyinka hoos taga inta jidadka laamiga ah maraan.
Abwaan oo sanooyin ka hor xaalada goboladaBanaadir iyo Shabeelooyinka oo tan maanta taaganka sii xun tahay!
“Salaaada Subax ayaa ka soo baxnay Siinka dheer waxaana Afasiiyooni taganay Sagaal saac oo galabti ah, iyada oo dayn nagula leeyahay”Abwaan Xabeeb.
Xirnaashiyaha wadooyiinka ayaa darawalada gaadiidelyda ku sifeeyeen inaysan awoodin bixinta lacagaha baada ah ee looga Qaado Goobaha isbaarooyiinka ah isla mar haatana ay go’aan sadeen in shaqo joojin ku dhawaaqaan inta guud ahaanba isbaaooyiinkasi laga qaadayo oo ALAH WEYN keenayo nasri xagiisa ka yimaada.
Dowladaha shisheeye oo Malaayiin Doollar ku Bixinaya in la dhiirigaliyo kufsiga lagu hayo Haweenka Soomaaliyeed!
Posted on May 2, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Dowladaha Britain iyo Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqay inay bixinayaan lacag gaaraysa laba milyan oo doollar si looga hortago kufsiga loo geysto haweenka Soomaaliyeed,”Siday u dhigeen warka” waana kuwa dhaqaalaha ugu badan ku bixiya Maleeshiyaadka Mooryaanta ah iyo ciidamada calooshooda ku shaqeeya ee Amisom.
Waa mashaariic “NGO” ah oo lacago badan laga sameysnayo,waxaana howshaas horboodaya Xisbiga talada Villa Somalia haya ee Dam jadiid iyo dad ay qaraabo yihiin hogaanka Xisbiga.
Wadada isku xirta Leego iyo Yaaqbariweyne waxaa dhac iyo kufsi ka geystay maleeshiyaad mooryaan ah oo dhanka magaalada Muqdisho laga keenay,akhlaaq darro iyo fuxshi ayay cadawgu ka wadaaan Leego.
Ciidanka shisheeye iyo kuwa Soomaalida ay kufsi ugeysteen laba hablood islamarkaana ay dadka deegaanka ugu handadeen baahinta dhibaatada haddii aan lafurin goobo lagu zineysto!!.
“Ciidanka Leego qabsaday waxay shacabka ku hayaan fasaad aad u daran akhlaaq xumo ayay deegaanka ka wadaan marka lagasoo tago kufsiga ay geystaan,askari ayaa gabar caano u iib keentay Leego qori ku qabtay markaas ayuu yiri Maxaa deegaanka looga waayay meelo lagu dhilleysto suurtagal ma ahan waa in laga helaa haddii kale idinka ayaan idin kufsaneynaa”Waxaa sidaa yiri nin katirsan dadka degaanka.
BALCAD:-Dagaal u dhaxeeya Maleeshiyo beeleedka Dowlada Xasan Gurguurte ayaa goordhow kaqarxay Degmada Balcad.
Posted on April 27, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Dagaal xooggan ayaa waxa uu xilligaan dhex maraya Maleeshiyaadka Soomaalida oo kaaba kuwa soo duulay”maryo calasta” wuxuuna dagaalku ka qarxay degmada Balcad ee gobalka Sh/dhexe.
Dagaalkaan oo ka bilaawday goob ay jid gooyo”Isbaaro”u taallo maamulka Balcad ayaa wararka hor dhaca ah waxa ay sheegayaan in uu ka socdo xilligaan xarunta degmada iyada oo qasaaraha ka dhashay lagu sheegayo inta la’ogyahay hal askari oo geeriyooday.
Dagaalka ayaa waxa uu sababay barakac magaalada ka bilaawday iyada mudo dheer Balcad nabad ahaan jirtay intaan ka gayn maleeshiyo beleedkan ay horkacayaan kuwa soo duulay Amisom ama “Gumaadsom”
TAXANAHA TAARIIKHDA:-Maxaad ka taqaanaa 21-ka Isbaaro ee taala Gobolka Shabeelada Hoose, Halka ay yaalaan iyo Magacyada cida iska leh ee ay lacagta ka soo gasho?
Posted on April 16, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Waxaa wax aad looga naxo ah in xilligan oo ay Dowlad federal ah ay ka jirto Dalka Soomaliyeed, oo ragga hogaaminayo lagu xanto in ay aqoon leeyihiin, aysana ka qeyb qaaday Dagaaladii ka dhacay Soomaliya ay maanta madaxda Dowladda eeganayaan dhibaatada xun ee lagu hayo Shacabka Gobolka Shabellada Hoose.
Madaxda Dowladda waxa ay eeganayaan qaar ka mid ah masúuliyiinta Dowladda oo ay isbaarooyin gaaraya ilaa iyo 21 ay u taalo Dhamaan degmooyinka laga xureeyay Al-shabab ee Gobolka Shabellada Hoose, oo ay lacago baad ah kaga qaadanayaan dadka rayidka ah.
Haddaba, Isbaaroyiinka yaala Gobolka Shebellada Hoose iyo magacyada shakhsiyaadka ay lacagta ka soo gasho ayaa kala ah:
1- Isgoyska Ceelasha Biyaha(Waa deegaanka Barakayaashii Muqdisho) waxay u taalaa Gudoomiyaha Lafoole C/laahi Jabeey Habargidir CEYR ah.
2-Siinka dheer waxaa yaalo labo isbaaro waxayna u yaalaan JENERAL Maxamed Rooble Jimcaale (Goobaanle) oo horay u ahaa taliyihii maleeshiyada Dooxada Juba(Walaalaha Galgaduud)ee madaxda ka ahaa Qabqable Bare Hiiraale waana nin CEYR ah haatana waa taliyaha Guutada 3-aad ee ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed.
3-Meel aan ka fogayn oo 100 Mitir kaliya u jirtana waxaa Isbaara u taal maleeshiyo beeleed ka amar qaata Sh.C/qaadir Cali Cumar waa Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha waana H/gidir Saleebaan.
4-Al-Nasri 3 waxaa yaala 5 isbaaro oo isku jira min 20 Mitir.
5-Irida hore ee Jaamacadii Lafoole waxay u taal maleeshiyo ku heyb ah Madaxweyne Xasan Shiikh waana meesha loo yaqaan Shanta Golaha sare.
6-Carbiska waxay u taalaa Milateriga dowlada oo ku heyb ah Madaxweyne Xasan Shiikh waana tan ugu waxyeelada badan dhanka shacabka.
7- Baar-Ismaaciil waxay u taalaa Milateriga dowlada waxayna ka amar qaataan sarkaal lagu magacaabo Hurdaaye oo Madaxweynaha ku beel ah.
8-Laanta Buuro waxay u taal Milateriga dowlada beel ahaana waa Abgaal.
9-Degmada Number 50 waxay u taalaa Sarkaal wato ciidanka deggan degmada oo beesha Biimaal kasoo jeeda.
10-Shalanbood waxay u taalaa Maleeshiyo Beeleed isku dhaf ah (Habargidir iyo Gare)waxayna si toos ah ugu xiran yihiin Gudoomiyaha Gobalka Shabeelaha hoose C/qaadir Siidii.
11-Isbaarada Buufow(Degmada Marka) waxay u taalaa Milateriga dowlada ninka lagu magacaabo Liibaan Madaxweyne & C/qaadir Siidii Gudoomiyaha Gobalka Shabeelaha hoose .
12-Ceeljaale(Degmada Marka) waxay u taal Milateriga dowlada.
13- Janaale waa Isbaarada ugu Dakhliga badan isbaarooyinka waxaana shirko ku ah C/qaadir Siidii Gudoomiyaha Gobalka Shabeelaha hoose iyo Jeneral Maxamed Rooble Jimcaale (Goobaanle) oo uu wakiil uga yahay wiil uu adeer u yahay oo lagu magacaabo Liibaan Madaxweyne oo kuna dhaawacmey dagaalkii Marko, hada kumeel gaar ahaan waxaa u jooga sarkaal lagu magacaabo INA CEELBUUR.
14-Cabdow Dibile isbaaradaaan waa tan ugu dambeysay oo la soo dhigay waxayna u taalaa Milateriga dowlada ku heyb ah Madaxweyne Xasan Shiikh.
15-Aw-dheegle waxaa isbaaro ay u taalaa C/qaadir Siidii Gudoomiyaha Gobalka Shabeelaha hoose & Ciidankii laga soo wareejiyey Marko, waxaana shirko ku ah sida tan Janaale oo kale Gudoomiyaha Gobalka C/qaadir Siidii & Jeneral Maxamed Rooble Jimcaale (Goobaanle) Taliyaha Guutada 3-aad ee ciidanka Xooga dalka Soomaaliyeed Ex-hogaamiye maleeshiyada beesha Cayr.
16-Mokeyga Afgooye waxaa Isbaara u taalaa Cabdi Ileys oo ah Gudoomiye ku-xigeenka Arrimaha Bulshada Degmada Afgooye waana Murusade.
17- Tixsiile waxay u taal Sarkaal maleeshiyo oo lagu magacaabo Maxamed Raage Dhiilow oo kuheyb ah Madaxweyne Xasan Shiikh.
18-Warmaxan waxay u Taalaa Jeneral Cali Ciise Caraaye(Gacmodulle),waxaana wakiil u ah sarkaal uu adeer u yahay lagu magacaabo (FOR-FOR) waa Abgaal.
19- Wanla-weyn waxay u taalaa Sarkaal lagu magacaabo Cumar Cali Cadow oo wakiil ka ah Sarkaal lagu magacaabo Muuse Gurre oo xiligii WARLORDka ahaa Ninkii heysan jirey Boondheere & Shibis.
20- Yaaqbiri-weyne waxay u taalaa isbaaro nin uu Tuuladaas u magacaabey Gudoomiyaha Gobalka Sh/hoose C/qaadir Siidii taasoo uu isna Shirko kula yahay.
21. Leego isbaaradaan waa Shirko Saddex geesood ah, waxaana shirko ku ah Gudoomiyaha Gobalka Shabeelaha hoose C/qaadir Siidii, Milateriga dowlada & Gudoomiyaha Tuulada uu u magacaabey C/qaadir Siidii oo lagu magacaabo Abuukar Leego.
Inkasta oo ay Isbaarooyinku intaan ka badnaayeen ayaa hadana kuwani waxaan u soo qaatay inay ahaayeen kuwo in la sheego u baahan hadaba Shabeelaha hoose 21 Sano kadib 21 Isbaaro in la dhigto qaybaha yar ee gobolka ee laga saaray Shabaab ma waanay taasi daliil u ahayn in gobolku uu markale u baahan yahay dib u xorayn?.
Mise xaalku waa Soomaalidu ma xishootee wey baqdaa si ay kuu nabadgelisana sharta uga hormar!.
Waxaa kaloo iyana jirta oo in la iftiimiyo u baahan Xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Shabeelaha hoose oo aan marnaba ka hadlin dhibta lagu hayo shacabka ay metelaan ee ku nool gobolka Shabeelaha hoose iyadoo aan la ogeyn sababta keentey in ay marqaati kaliya ka noqdaan dhibta lagu hayo dadka ay matalaan.
Waxaa kaloo u baahan in la xuso in ummada Soomaaliyeed maanta ku heshiisey nidaamka Federalka taasoo micnaheedu yahay in deegaan kasta dadka ku nool ay ayagu ka tashadaan kana shaqeeyaan aayahooda mar kale waa iga su’aale sida ay aayahooda uga tashan karaan dad Ciidankii difaaci lahaa Diiranaaya?
Odayaasha Dhaqanka Biimaal
Maamul goboleedyada cusub iyo dastuurka oo sidan u ogol!!
Posted on April 5, 2013 by Voice Of Somalia Standard
Somaliya iyo sida loo rabo,ogow ama ha ogaan!!
2-Shabeelada hoose+Bay +Bakool.
Waxaa soo dhamaaday ama hada loo fadhiya maamulka loogu magac daray Jubaland oo calan loo sameeyay,waxaana ku dhan sida la shegayo Kenya iyo Itoobiya,waxaana horboodaya dad ku dhashay dhulka ay hore u haysteen.,kuwaas oo hab qabiil loo keenay Kismaayo,waxaana Kismaayo maalin cad laga soo cayreshay dowladii la sheegay in beesha caaalamku aqoonsatay oo Maraykanka la geeyay Maadaxweynaheeeda!
Waxaan dhawaan maamul loo samayn doona Bardheere ilaa Afgooye oo u muuqda magaalada Moqdisho,waana howl ay wadaan kuwa hada shiraya.
Waxaa kale oo maamul kale loo samayn doonaa Gaalkacyo ilaa Balcad oo banaanka Xamar ah.waana howl faraha lagu hayo,sida ay sheegayaan dadka ku lug leh.
Maxaa u haray Xasan Gurguurte iyo maamul beeleedkiisa Banaadir oo fadhigiiso yahay Villa Somalia.
Dagaalo u dhaxeeya Ciidamada Dowlada Federaalka”Maleeshiyo Beeleed” oo magaalada Marka ka qarxay iyo hoobiye is qabsaday xaafadaha magaalada oo dhan!
Posted on March 28, 2013 by Voice Of Somalia Aside
Waxaa markale qaxaya dadka reer Markood ka dib tagistii kuwa soo duulay ay tageen magaalo xeebeedka Marka.
Waxaa magaalada qabsaday ciidanka soo duulay ee Amisom iyo Maleeshiyo beeleed “KOPY” miino baar u ahaa!
Dagaalka waxaa la sheegay inay qaadeen ciidamo ka amar qaata gudoomiye kuxigeenkii dhinaca amaanka magaaladaasi C/salaan Maxamed Cabdulle ee maanta xilka laga qaaday waxaana ay weerar ku qaadeen ciidamo uu watay gudoomiyihii magaalada marka Axmed Cukaash ee isna xilka laga qaaday.
Dagaalka waxa uu yahay mid xoogan waxaana lagu soo waramayaa in rasaasta qeybaheeda kala duwan la isweydaarsanayo waxaana uu ka socdaa bartamaha magaalada Marka Cadeey ee gobolka Sh/hoose.
Ilaaha iyo hada lama hayo war sax ah,maadama xabado soocoto!
Dagaalkii Ciidamadii Biimaal ay ku dileen barasaabkii Suldaanka Zenzibar ee Marka.
Somali History of (1400-2000) qoraagu inta badan wuxuu kasoo xigtay qoraalka buugan kale oo la yiraahdo: Ref the Shaping of Somali Society: Reconstructing the History of Pastoral People 1600-1900..Lee V.Cassanelli University of Pennsylvania Press Philadelphia, 1982.
Sidaan ayeyna ku bilaabaneysaa.
1876dii taariikhdu markey aheyd ciidamo Biimaal ah ayaa waxey si gaadmo ah ku dileen Barasaabkii (Gudoomiye) “Saalim Bin Yacquub” ee Suldaanka Zanzibaar ugu masuul ahaa magaalada Marka iyo 40 askari uu watay Barasaabka iyo ciidankiisa waxaa lagu dilay jidka u dhaxeeya Xamar iyo magaalada Marka.
Magaalada Marka oo caan ku aheyd Baayacmushtarka, waxaa sidoo kale mararka qaar dhibaato ka dhax dhici jirtay Carabtii daganeyd magaalada Marka iyo Biimaal.
Biimaalku waxey si gaar ah ugu soo horjeedeen in uu Talyaaniga ku fido dhulkooda, laakin Carabtu waxey ahaayeen dad Baayacmushtar ah mar walbo waxey dantooda ku jirtay in ay shisheeyaha xiriir fiican la yeeshaan.
Biimaalkuna waxey heshiiskaas Carabta iyo “Ajnabiga” u arkayeen mid dantooda iyo noloshooda khatar ku ah.
Xeelada Biimaal isticmaali jireen waxaa kamid aha in Raashiinka ka joojiyaan xeebaha Banaadir gaar ahaan magaalada Marka.
1890(Bilowgii) Suldaankii cusbaa ee Zanzibaar Suldaan Khaliifa ayaa waxa uu dhulkii Banaadir ku wareejiyay Talyaaniga, isagoo aan Somaalida waxba kala tashan Soomaaliduna maarkii arintaan ogaadeen aad ayey ugu xumaadeen.
1890 markii Talyaaniga uu ka soo degay xeebaha Banaadir Markiiba hogaamiyaashii Biimaal waxey bilaabeen in ay shirar deg-deg ah ku kulmaan si ay ugu tabaabusheystaan waxa uu damac sanyahay talyaaniga.
Markii Talyaanigu ogaaday in uu Biimaal yahay Qabiilka kaliya mucaarad nimadiisu mideysantahay, markiiba Talyaaniga wuxuu isku dayay sidii uu u kala qeybin lahaa Biimaal, hasa ahaatee wey usuurto geli weyday, mudadii u dhaxeysay 1890 ilaa 1908, midnimadii Biimaal ismey bedelin, weyna ku adkaatay Talyaaniga sidii magaalada Marka uu gacanta uu ugu dhigi lahaa, balse markii lasoo gaaray aakhirkii 1908dii, qaar ka mid ah hogaamiyaashii Biimaal waxaa u cadaatay in ay adagtahay dagaalka Talyaaniga ay kula jiraan sii wadaan, waxeyna qaar ka mid ah isku raaceen in Talyaaniga heshiis la galaan lana shaqeeyaan.
Taariikhda Beesha Biimaal waxay ku qorantahay Baal Dahab ah,yaan la tirin!!.
Taariikhda wax bay qortaa waxna way kaydisaa, Beesha Biimaal oo ka mid ah Beelaha dega Koonfurta dalka Soomaaliya waxaa ay leedahay taariikh Baal Dahabi ah ka gashay marka laga hadlayo taariikhda Soomaaliya.
Qarnigii 18aad ee taariikhda Miilaadiga Beesha Biimaal waxaay ahayd Beel ka tilmaaman Beelaha kale ee dega Koonfurta Soomaaliya waxaa lagu xusuustaa halgankii dheeraa ee ay usoo gashay gumaysi la dirirkii Gobolka Shabeellada Hoose .
Markii uu socday dagaalkii u dhaxeeyey gumaysigii Ingiriiska iyo halyeygii caanka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdille Xasan waxaa la soo wariyey in dagaalkaasi ay ka qayb qaateen beelo Soomaaliyeed oo tira badan kuwaa oo taageerayey gumaystihii Ingiriiska laakiin Beeshan Biimaal weli lama soo tabin inay ka qayb qaadatay ama ay garab istaagtay gumaysi dhul doon ah .
Waxaa kaloo taariikhda rag culima ay ku sheegeen in beelo tira badan ay xabado ku tuureen Sayidka hase ahaatee beeshan taariikhda ayaa xustay inay ahayd beel mujaahidiin ah oo weligood diidanaa gumaysi inkastoo taariikhda wax badan lagu sheegay hadana waa beesha kaliya oo awoowayaashooda ay ku shahiideen dagaaladii lala galay Talyaaniga.
Mudo 14 sano ah gumeystaha Talyaaniga uma suurtoobin inay cagta soo dhigaan dhulka ay Beeshu degto oo sababna ay u aheyd isku duubnaantii beesha ay laheyd ii hogaamiyayaashoodii u heelnaa iska difaaca gumeystaha Talyaaniga kuwooda ugu caansanaa ay ka mid ahaayeen Maclin Ibraahim Qaasim”Kabtoole”,Jabriil Macliin Barrow iyo Rag kaloo odayaal ah oo beesha kamid ahaa.
Inta uu socday halgankaasi waxaa jiray hal ku dhigyo ay adeegsan jireen hugaamiyayaashii Beesha, halku dhigyadii ay adeegsan jiren waxay ahaayeen kuwo aan qoraal lagu soo koobi Karin waxaana ka mid ahaa: ‘Reer janaad waa jid galeen reer jaxiimow iska jooga’.
Markii gumaystahaTalyaaniga ay ku guulaysteen inay kasoo degaan Deegaanka loo yaqaano Dhanaane ayna Koonfur ka mareen dhulkii Beeraha ayaa hogaamiya yaashii Beesha waxaa ay isdhaaf sadeen erayo taariikhda galay waxaa eryada ka mid ahaa: ‘Dhoobee dheefle waa dhuntii yaa dhanaane dhicihaayo, dhalanyeradii dhamayd aa dhanaane dhicihayso, intaad dheeshiyoo dhug beeshay maad dhanaane dhicihee ,dhanaane miin dhiciwaayo dhuuwadayda dhalaaqo waaye, dhuuwadaada miid dhalaaqdo, dhinixoo yaa dhalaayo, dhinixoo aan dhullahayn intee lagu dhaqaa’.
Hadaba intaasi ka dib guushii gumaystihii talyaaniga Beesha Biimaal waxaa ay yeelatay dad lagu dhex beeray oo magac, jinsi iyo dhalasho intaba kula wadaaga hase ahaatee aan kugu tala ahayn waxaa jirta oraah dhahaysa:‘Nin aan kugu calool ahayn kugu cod maaha’,waxaan ka wadaa erayadaa isku xerkii beeshan ayaa waxaa ku tuntay dad sheeganaya magaca beesha oo talyaaniga qandaraas uu ku siiyey inaysan isku imaan maadaama isku imaatanka Beesha Biimaal ay caqabad ku noqon karto cid walba oo soo hamisa dhulkan barwaaqa sooranka ah.
Waxaa la xusuustaa hugaamiyayaashii usoo baxay Biimaal inay noqdeen kuwo aan dan u hayn umada ayka dhasheen taas oo walaahooda ku beertay calool xumo kuwaa oo ah dadkii ku abtirsanaayey beesha ilaa laga arkay in la yiraahdo: ‘hadaan nahay beel hebel kama mid ma nihin beesha Biimaal’waana cadaymaha muujinaaya in lagu soo dhex dhuuntay Beeshan ay taariikhda siweyn u qortay hadaba markii hogaamiya kooxeedyadii haysteen koonfurta Soomaaliya waxay ay garab ka dhigteen niman sheeganaya odayaal dhaqameed suurtageliyeyna in la kala dilo dadka beesha Biimaal.
Hadda ka hor qoraal aan aqriyey ayaan ku arkay qaabkii loo xalaalaystay dhulkii Biimaal iyo Hantidiisa waxaa ka mid ahaa qoraaladaasi ilaa 8, guri oo subax walba ay kasoo wada toosaan wiilal cayr ah oo Biimaal ay abtiyaal u yihiin halka qoraalka aan ku arkay in sanad walba odayaasha Biimaal ay kasoo xajiyaan hantidooda oo ay kala wareegeen dad aan gobolka u dhalan.
Hadaba aqristow ujeedada aan leeyahay ayaa ah inaan soo bandhigo dhacdadii ugu dambaysay oo Biimaal lagu xalaalaystay noloshiisa walow horay loo arkay in dhulkiisa iyo hantidiisa lagala wareegay hadana waxaa ay joogtaa noloshiisa hadaba maxaa dhacay, laba qof oo aan jeclayn inaan magacyadooda soo hadal qaado ayaa sida ay sheegteen u istaagay inay isku keeni doonaan Biimaal.
Arintaasi ayaa waxaa si aan leexleexad lahayn u qaadacay nabaddoonada Biimaal hase ahaatee waxaa ka hor timid awood ay u bawac dhigiwaayeen, raggii istaagay ayaa waxay sheegteen inay horkacaayeen culimadii Beesha laakiin war mar dambe soo baxay ayaa xaqiijiyey in culimada la qasbay in ka badan 13 maalmood ayey socdaalo ku jireen waxayna soomareen dhul kala duwan ugu dambayn waxay ku guulaysteen inay deegaanka NO 5O isugu keenaan Biimaal.
Waxaana halkaasi labadii qof ay ku heleen lacago caqliaga ka weyn oo loogu tala galay in lagu soo dumo oday dhaqameeka waxaana si qasab ah lagu yiri suldaan Axmed Maxamed Cali waxaad beyco la gashaa Al shabaab taasi ay ku kali noqdeen labadii qof istaagtay iyo suldaankii la qasbay.
Hadaba hadaan nahay dad ku abtirsada Beeshan taariikhda gashay ma noqon karnaa dad ka tashada aayhooda waxaana iminka aad la socotiin Yuusuf indha Cade inuu samaystay Suldaan gacan ku samays ah oo u dhashay beesha una muuqda mid hergelinkara in dhulkan si cad ah loogu gacan geliyo reer Dhuusa Mareeb.!!!!!!???
Talo iyada kugu ma noola laakiin adiga ayaa ku nool waxaan ka wadaa aan tashanno haddaan nahay Biimaal jaaniska hada aan haysanno ayaa ah mid qaali ah.
Waxaan kusoo koobayaa qoraalkayga in kastoo aan ahayn qof yaqaana taariikhda Beeshayda, aan noqonno kuwo soo nooleeya taariikhdii iyo wadadii ay ku geeriyoodeen awoowayaasheena wax naloo meeriyey iyo wax naloo tilmaamay ayaan danaheena ku weynay.
Inkastoo dulmiga loo gaystay Beeshaan ay horkacayeen dad caada qaatayaal ah ayaa hadana weli kama raja dhigin hankooda ku aadan inay dhamaystiraan hantida tirada yar ee soo hartay waana kuwa iminka fadhiya shirarkaTFGda ay soo qaban qaabisay looguna tala galay inay horkacaan duulaano dhawaan la iclaamiyey kaa oo lagu qaadi doono guud ahaan Gobolka Shabeelada Hoose.